घोराहीमा लागेको कांग्रेसको घाउमा लमहीमा नुनचुक
नारायण खड्का दाङ, असार २०
नेपाली काँग्रेसले लमही नगरमा सुरुवातदेखि नै मेयर र उपमेयर पदमा अग्रता कायमै राखेको थियो। घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेले अग्रता लिइरहेका बेला कांग्रेस समर्थकले चित्त बुझाइरहेका थिए लमहीको अग्रतामा।
तर घोराही जितेर एमालेले लगाएको कांग्रेसको 'घाउ' मा लमहीको पराजयले 'नुन' थपेको छ।
मंगलबार बिहानसम्म काँग्रेसका मेयरका उम्मेदवार जोगराज चौधरी लमहीमा एमालेका उम्मेद्वार कुलबहादुर केसी भन्दा झन्डै ६ सय बढी थिए। ९ वटा वडा रहेको लमही नगरका वडाहरुमा कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको थियो। वडा नं १ र वडा नं ९ बाट दुइतर्फबाट गणना भैरहेको थियो।
मंगलबार बिहान लमही नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा नं. ५ को मतगणना सुरु भयो। मगणना सुरु भए लगत्तै कुलबहादुर केसीले मत खातामा थप्न थाले। वडा नं. ५ नयाँ बस्ती क्षेत्रमा एमालेका कुलबहादुर केसीलाई एक हजार ३६ मत प्राप्त हुँदा काँग्रेसका चौधरीलाई जम्मा ४ सय ३५ मत मात्रै प्राप्त भयो।
वडा नं ५ नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्लानिङ गरेको बस्ति क्षेत्र हो। एमालेका कुलवहादुर केसीलाई सोही क्षेत्रबाट काँग्रेसका जोगराज चौधरीको भन्दा ६ सय १ मत बढी आयो। यही एउटा वडा र वस्तीबाट सुरुवातदेखि नै अग्रता हासिल गरेका काँग्रेसका जोगराज चौधरीलाई कुलबहादुर केसीले पल्टाउन सफल भए।
मतपरिणाम घोषणा हुँदा केसी ८३ मतले विजयी भए।
लमहीको वडा नं. ५ मा काँग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवारलाई मात्रै हैन उपमेयरकी निर्वाचित देवका बेलवासेलाई पनि तुलनात्मक कम भोट आयो। एमालेकी पराजित उपमेरकी उम्मेदवार मीना गुरुङ भन्दा निकै कम मत प्राप्त भयो। गुरुङलाई ९ सय ३२ मत प्राप्त हुँदा उपमेयरमा निर्वाचित काँग्रेसकी बेलबासेलाई ४ सय ८१ मत मात्रै प्राप्त भयो।
लमहीको चुनावमा जातिय मतले पनि असर गर्‍यो। चौधरी बजार बाहिरका क्षेत्रमा प्रभावशालि देखिएका थिए। तर बजार क्षेत्रमा उनलाई मत आएन। लमहीको मुख्य बजार क्षेत्रमा थारुको बसोवास अरु जातजाति भन्दा निकै कम छ। जसले गर्दा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई घाटा भयो।
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमवहादुर खड्काका गृह नगरहो दाङको लमही। लमहीमा खुमबहादुरले आफ्नै उम्मेद्वार समेत खडा गरेका थिए। जसका कारण कांग्रेस जीत निकाल्नबाट चुक्यो। खुमबहादुर खड्काका भतिजा डिल्लीबहादुर खड्काले लमहीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए।
वडा नं. ५ बाट कांग्रेसले जम्मा ५ मत मात्रै प्राप्त गरेपनि खुमबहादुर खड्काको गाउँ लमही ८ सतवरियावाट खड्काले १ सय ५४ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यो सबै काँग्रेसकै मत थियो। डिल्लीबहादुर खड्काले कुल २ सय ३९ मत प्राप्त गरेका थिए। उनको स्व्तन्त्र उम्मेदवारी नपरेको भए काँग्रेसका जोगराज चौधरीको जीत हुनसक्थ्यो। खड्काले जीतका लागि आवश्यक मत काटिदिए।
लमही निवासी नेकपा एमालेका प्रदेश नं. ५ सदस्य सुरामणि बेलवासे वडा नं ५ एमालेको गढ भएको बताउँछन्। पहिलो संविधानसभामा पाँचै क्षेत्र माओवादी केन्द्रले जित्दा समेत एमालेले उक्त वडामा धेरै मत पाएको र दोश्रो संविधासनभामा पाँचै क्षेत्र कांग्रेसले जित्दा पनि धेरै भोट पाएको बताउँछन् उनी।
'खुमबहादुर खड्काको राजनीतिक 'बैंस' रहँदा र माओवादीको 'बैँस'मा पनि वडा नं. ५ र तत्कालिन चैलाही र सोनपुर गाविसमा एमाले कहिलै पराजित भएको इतिहास छैन', उनी जीत पहिला नै निश्चित रहेको दावी गर्छन्।
पछिल्लो समय सरकारले नगर विस्तारको क्रममा लमहीको विस्तार गरि खुमबहादुरको खड्काको गाउँ सतबरियालाई समेटेको थियो। सतबरियता जोड्दा समेत वडा नं. ५ को भोट निर्णायक रहने विष्लेशण आफूहरुको पहिला नै रहेको आंकलन एमालेको रहेको उनले बताए।
वेलवासे २०५४ सालमा हालको लमही वडा नं ५ को लमही अर्थात् तत्कालिन चैलाही गाविसवाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
सेतापाटीसँग बेलवासेले भने ‘दाङमा सबै तिर हार्दापनि एमालेको शाख जोगाउने गाविस चैलाही र सोनपुर नै हुन र एमालेका यही किल्लाले अहिले पनि शाख जोगाए।’
काँग्रेसले मतगणना प्रारम्भ भएसँगै वडा नं १,२,३ जित्दै सुरुवात देखि नै लमहीमा अग्रता कायम गर्‍यो। तर वडा नं. ४ र ६ ले एमालेलाई राहत दियो। अनि त्यहि राहतको भरमा पाँच नंम्बर वडाले विजय दिलायो।
‘मुख्य बजार क्षेत्र वडा नं. ५ मा बरु माओवादी केन्द्रसंग हाम्रो प्रतिपर्धा भयो तर रुख निकै पछाडि पर्यो र हाम्रो जित भयो’ बेलवासेले भने।
दाङको पाँच मध्ये पाँचै क्षेत्रमा संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन जितेको कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनमा कमजोर देखिएको छ। घोराही र लमही कांग्रेसले गुमाएको छ भने तुलसीपुरमा पनि उ एमाले भन्दा पछाडी छ।
कांग्रेसको दाङको साख तुलसीपुरले जोगाउला वा नजोगाउला त्यो भने मतपरिणामले देखाउनेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २०, २०७४, ०६:१२:४१